देउवाको खुला चुनौती र युवा कांग्रेस - Pura Samachar
देउवाको खुला चुनौती र युवा कांग्रेस
कांग्रेसको महाअधवेशन नजिकिँदै गर्दा नेतृत्वमा दाबी गर्ने सिलसिला चलिरहेको छ । अहिलेसम्ममा संस्थापनतर्फबाट वर्तमान सभापती शेरबहादुर देउवाले घुमारो पाराले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । सभापती देउवाले आफूले निकै दुख र कार्यकर्ताको मन जितेर गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग लड्दै नेतृत्व हासिल गरेको र आफूबाट पनि त्यसै गरी नेतृत्व छिन्‍न खुला चुनौती पनि दिएका छन् । सभापती शेरबहादूरदेउवाको खुला चुनौतीकाबीच युवा नेता ‘गगन थापा सभापती’मा लड्ने चर्चा पनी चलिरहेको छ । यी दुई पुस्ताका नेताबीचको नेतृत्व चर्चासँगै केही प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी भएको छ ।
के अहिलेको युवा नेतृत्व सही बाटोमा छ ? के पार्टी विधी सम्मत चलाउनमा रचनात्मक सहयोग गरेको छ ? के अहिलेको कांग्रेसलाई युवा नेतृत्वले मात्र पार लगाउला ? के कांग्रेसको पुरानो पुस्ता अब विश्राम गर्ने बेला भएको हो ?
के साच्चिँकै युवा कांग्रेस कांग्रेसीको मन जित्दै नेतृत्वमा आउन सक्ला ? के युवा नेतृत्व आउने बित्तिकै बीपीको कांग्रेसको साख फर्काउन सक्ला ? कि कतै कांग्रेस आईका अध्यक्ष राहुल गान्धीको नेत्तृत्वजस्तै बन्ला अधिवेशन अगाडि कांग्रेसका लाखौं कार्यकर्ताले यी प्रश्नमाथि विचार बिमर्स गर्नु जरुरी छ । तसर्थ मैदानमा खेल सुरु भइसकेको छ । सभापतीले खुल्ला चुनौती दिनु भएको छ । अब युवा र तमाम कांग्रेसको मन जितेर नेतृत्व हत्याउने तागत छ त अहिलेका युवा कांग्रेसमा ? सभापतीले ठीकै भनेका हुन नेतृत्व दया-मायाले हस्तान्तरण हुने कुरा पनि होइन कसैले गर्दा पनि गर्दैनन ।
सबै युवाले युवा नेतृत्वको माग गर्दा आफ्नो विगत अनि स्कूलिङ पनि हेर्ने हो की ? आफनै नेतृत्वलाई सार्वजनिक रुपमा गाली-गलोज गरेको हिजोको विगत । अराजकताको पराकाष्टा पा गर्दै संगठनको नेतृत्व लिएको कालो वर्तमानलाई के युवा भन्दैमा महाधिवेशनमा मतदाताले मत देलान त । के एक्लै गगन थापा जित्दैमा संगठनको कायापलट होला त ।
निर्वाचनबाट चुनिएर आएको नेतृत्वलाई निर्वाचित भएको दुई महिनाबाट नै अक्षमको पगरी गुथाउने परीपाटीले के संगठनको गरिमा र अनुशासन कायम गरेको थियो र ? भविष्यमा गर्ला त ? अहिलेको प्रश्न यही हो यसकै उत्तरमा काग्रेसको भबिष्य लुकेको छ ।
लामो समयदेखि कोइरालाले नेतृत्व गरेको कांग्रेस पार्टी देशकै दुर्गम क्षेत्रमा जन्मिएका किसानको छोरा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्वमा आएदेखि उहाँको हात बाध्‍ने काम गरियो । देशमा दुई कम्युनिष्ठ शक्ती एक भई करिब ६० प्रतिशत भन्दा बढी जनमत एकत्रित हुँदा काग्रेस हार्नु स्वभाविक नै थियो । तर त्यसको सम्पूर्ण दोष वर्तमान नेतृत्वमाथि मात्र थोपरिएन बरु हरेक तरहले नेतृत्वलाई हायलकायल गर्ने कार्य गरियो ।
पार्टीमा पदाधिकारी चयनदेखि विभाग गठनसम्ममा अनावश्यक बखेडा झिकेर हलो अट्काई गोरु चुट्ने काम गरियो । के यस्ता गतीविधी रोक्न र पार्टीलाई वैधानिकरुपमा निर्वाचि नेतृत्वलाई सञ्‍चालन गर्न दिनुपर्छ भनेर कुनै युवाले प्रश्न उठाए त ? उठाएनन् । बरु शेरबहादूर देउवाले पनि भाग खोजेको तर्क गरे । यसरी नै भागवण्डामा पार्टी सञ्‍चालन गर्ने हो भने अधिवेशनको नाटक किन गर्ने यस कुरामा पनि अहिलेको युवा भनिने कांग्रेसले कुनै पहल गरेको देखिएन ?
किसुनजी लाई गिरिजाप्रसाद कोईरालाको निर्देशनमा अन्तरघात गरी हराउन प्रयोग गरिएका र फरक समूहलाई जसरी पनि सिध्याउनु राजनिती हो भन्ने स्कुलिङ्गबाट आएका केही युवा कांग्रेस त्यसदेखि वर्तमानमा भएको पार्टीभित्रको अन्तरघात रोक्न कुनै पहल गरेको पनि देखिएन । बरु पार्टीमा ३६४ दिन कांग्रेस भएर अवसर लिई मतदान नगर्ने जिम्मेवार पदमा बसेर आफनै उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा हराउन लाग्नेलाई यो वा त्यो गुटको नाममा कारबाही बचाउनमा लागेको देखियो ।
२०७४ को संघीय संसदको चुनावको आफ्नो क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक हुने बित्तिकै बडो उत्ताउलो ढंगले गगन थापाले सभापतीको राजीनामा मात्र माग्‍नुभएन बरु सभापतीकाविरुद्ध ‘जेहाद’ नै छेडियो । तत्कालीन अवस्थामा उनकै पहलमा बनाइएको सात भाई समूह विश्वप्रकाशको प्रवक्ता नियुक्तीसँगै तितरबितर मात्र भएन थापाको उक्त कुरा पनि पदकै बार्गेनिङ्ग थियो भन्न बुझ्न धेरै समय पर्खनु परेन ।
अर्कोतिर २०६४ को चुनावमा राष्ट्रपतिको लोभमा कुनै पनि क्षेत्रमा चुनावी सभामा समेत नगई दुई शब्द नबोलेका तत्कालीन सभापती स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको पार्टीको ‘शर्मानक’ हारमा तिनै गगनले दुई शब्द खर्चन पनि आवश्यक ठान्नुभएन जबकी त्यतीबेला गगन थापा झन जवान र गणतन्त्रका जल्दाबल्दा नेता भइ सक्नुभएको थियो । यसरी एउटै कुरामा नेता हेरि फरक-फरक दृष्टीकोण बनाउने संकुचित र पूर्वाग्रहि मन पनि कांग्रेस पतनको कारण बनेको छ । र त्यस्तो संकुचित धारणा बनाउने युवा नेतृत्वको पनि पार्टीमा कुनै कमी छैन ।
अहिले कांग्रेसमा भागबन्डाको राजनीती यति फोहरी र प्रत्युपादक अनि संगठन अराजकहरुको झुण्ड भएका छ्न् भन्ने कुरा हेर्न सबै भात्तृसंगठन र शुभेच्छुक संस्थालाई हेरे पुग्छ ।
निर्वाचित नेविसंघ अध्यक्षलाई महामन्त्रीले कथित कारबाहीको नाममा जारी गरेको विज्ञप्तीलाई बन्द कोठामा बसेर मौन समर्थन गरेर बस्नेहरुले निर्वाचित पदाधिकारिको उछितो काड्दा संगठन अराजकको भिड हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का कहिले राखेनन ।
यस कुरालाई रोक्ने कुरामा पनि कुनै रचनात्मक भूमिका युवा भनिने नेत्तृत्वबाट गरेको देखिएन । तरुणमा त्यही हालत भयो । नेविसंघलाई त कुन हालतमा पुर्‍याइएको छ भन्ने कुराको जवाफ त सभापती देउवाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा स्कूलमा छ नेबिसंघ ? भन्ने प्रश्न गरेबाट प्रष्ट हुन्छ । पार्टीको नर्सरीको रुपमा मानिने नेविसंघमा प्रजातान्त्रिक चरित्रसँगै नेतृत्व विकास गराउन पर्नेमा आफ्नो वरिपरी घुमे मात्र टिका लगाएर नेतृत्व दिने परिपाटीले उनीहरुको मुल आत्मा नै मार्ने काम गरिएको छ । प्रजातान्त्रिक चरित्र निर्माणको स्कूलिङ् दिनुपर्ने युवालाई गुलामी संस्कार पढाइँदैछ । यस्तो स्कूलिङ्गबाट आएकाहरु भोली कस्तो नेतृत्व दिने हुन सम्झिँदा पनि आङ् सिरिङ्ग हुन्छ ।
अहिले पार्टीमा चाहे युवा हुन चाहे पुराना केन्द्रीय सदस्य हुने बित्तीकै गुट बनाइहाल्नु पर्छ भन्ने मानसिकताको सिकार भएका छ्न । त्यस्ता मानसिकता बोकेकाहरुको जबसम्म संगठनमा बाहुल्यता हुन्छ तब सम्म जस्तै युवा आए पनि केही हुनेबाला छैन । आज हरेक केन्द्रीय सदस्यले गुट बनाउने नाममा एक जना नेबिसंघ एक तरुण एक प्रेस युनिएन एक महिला एक दलित समाहित झुण्ड बनाएका छ्न र त्यही झुण्डको सर्वोपरी हितमा दत्तचित्त भएर लागीरहेका छ्न । अनि तिनैका टाउका गनेर आफ्नो पदको बार्गेनिङ गरेको देखिन्छ । यो प्रबृतीबाट युवा भनिने कांग्रेस पनि अछुतो छैन ।
तसर्थ यस अधिवेशनमा जसले निर्बाचित नेतृत्वलाई विधी विधान बमोजिम चल्ने र चलाउनेमा सहायक हुने प्रतिज्ञा गर्छ र सो कुराको लागी बिश्वास गर्न योग्य हुन्छ त्यही नेतृत्व चयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यो नेतृत्व युवाले लिउन वा पुरानाले । यसै कुराले पार्टीको गुमेको साख र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई बलियो बनाउने छ । र यही नेतृत्वले बीपी कोइरालाको सबैभन्दा पुरानो र प्रजातान्त्रिक पार्टीमा प्राण भर्नेछ । अन्यथा, जो आए पनि केही हुनेबाला छैन आगे यहाँकै मर्जी… ।